Maalinta: 16-ka July, 2018
Turkey ee Waxbarashada Park Traffic Foundation Children ugu weyn ee Sanliurfa Atıldı
aasaaska Turkey ugu weyn 'Carruurta Traffic Tababarka Park ayaa la dhigay in Sanliurfa. Isagoo ka hadlayay xafladda ku saleysan 32 kun oo mitir oo laba jibbaaran, xarunta bilaabay inuu la dhisay meel ka mid ah Duqa Şanlıurfa Nihat Çiftçi, Turkey " [More ...]
Garoonka diyaaradaha ee Esenboğa Airport
Qandaraaska Farsamada ee Madaarka Esenboğa iyo Shaqooyinka Dhismaha ee Shirkadda Qandaraasleyda awgeed, Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMİ) wuxuu leeyahay qiime xadidan oo ah 2018 TL wuxuuna leeyahay qiyaas ku dhow TL 300559. [More ...]
Hawlaha Asphalt waxay ka bilaabmaan Mersin Otogar-Highway Connection Road
Ku dhowaad dhamaadka Mashruuca Wadada Iskuxirka Baska, kaas oo la rajaynayo inuu fududeeyo isu socodka magaalada. Shaqooyin raadin ah ayaa laga bilaabay mashruuca ay fulisay Dowlada Hoose ee Magaalada Mersin. Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii waddaa hormarinta taraafikada magaalada. [More ...]
Xaqiiqdii,… Waxaa laga doodayay sababtoo ah ma aysan dhameystirneyn tan iyo maalintii ajandaha la gaadhay… Si taa loo sii caddeeyo, TCDD waxay billowday mashruuca inay ku xirto Bursa labada tareenka xawaaraha sare iyo shabakadda tareenka xamuulka. Laba warshadood oo waaweyn oo ku yaal bartamaha Bursa [More ...]
Turkish Airlines waxay shaqaaleysiin doonaan shaqaalaha
IYAD, waxay kuxirantahay furitaanka garoonka saddexaad ee garoonka si loo haqabtiro baahida shaqaale cusub waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaale. Furitaanka gegada saddexaad ee Oktoobar 29, Turkish Airlines waxay ballaarin doontaa shaqaalaheeda. [More ...]
Geedaha cawska ah ee geedka taraamka ee ku yaala Izmir
Geedaha duulimaadka ee aagga taraamka, oo ka falceliya inay dhex maraan aagagga cagaaran ee İzmir, ayaa midba midka kale u duulaya. Khubaradu waxay ka digayaan sababta oo ah in lagu dhisay Gazi Boulevard oo ku yaal Izmir waxayna ka gudubtay meelaha cagaaran [More ...]
RayHaber 16.07.2018 Warbixinta Shirka
Garoonka diyaaradaha ee Esenboğa iyo dhismaha mulkiyada Isticmaalka Shirkadda Isgaadhsiinta ee IBB
Asi Nidaamka Tareenka '' Case 'oo ka soo horjeeda Türler ee Kılıçdaroglu
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Milderes Hogaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu oo caayaya Türel ayaa la xisaabtami doona maxkamada. Madaxweyne Turel, wuxuu sameeyay musuqmaasuq, isagoo ku fidiyay gacanta dadka lacagtiisa, sida kuwa aflagaadada ah ee loo soo jeediyay Kılıçdaroğlu oo ku saabsan [More ...]
Xakamaynta Cimilada Safarka Hore ee Manisa
Qeybta Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, howlaha gaadiidka rakaabka ee degmada Salihli waxay fuliyeen kantaroolka iyo xakamaynta basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay. Kooxaha Boliska Gaadiidka Salihli ee uga diga wadayaasha darawalada ku saabsan howlaha qaboojiyeyaasha, muwaaddiniinta [More ...]
Dhibaato la'aanta gaadiidka dadweynaha ee Mersin
Baadhitaanno ay sameeyeen Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin ee loogu talagay muwaadiniinta inay ku safraan tayo ka sii wanaagsan, si raaxo leh oo aamin ah ay ku sii socdaan iyagoo aan xasilloonayn. In kasta oo lagu ogaanayo xad-gudubyada midba mid oo qaadista tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay fududeeysaa nolosha iyo gaadiidka ee muwaadiniinta ku nool degmooyinka. Kocaeli - Wadada Yalova D-130 inta u dhaxaysa 22 ilaa 23 km, Gölcük Yüzbaşılar meesha waa buundada isku xirta. In la isguursado [More ...]
Injirta Tareenka ayaa ku dhuftey baabuur 4 dhintay
Degmadda Buinsky ee Jamhuuriyadda Tatarstan ee Ruushka, tareen rakaab ah ayaa ku dhacay baabuur tareen ah halkaas oo ay ku dhinteen afar qof. Tareenka in kabadan 4 rakaab ah oo ku sugan Jamhuuriyadda Tatarstan, Russia [More ...]
Dhismaha Kaafiyha Kocaoglu Vagonpark
Dawladda Hoose ee Magaalada polzmir, oo kaashaneysa maalgelinta nidaamka tareenka, ayaa buuxin doonta baahida baarkinada ee tirada sii kordheysa ee baabuurta dhulka hoostiisa mara ee 2 dabaqa hoose, oo laga dhisayo Halkapınar. Isla waqtigaas gaari xNUMX ah ayaa dhigan kara [More ...]
Duqa magaalada Aktaş: Bisiklet Baaskiil ee magaalada Bursa waa in uu noqdaa mid ballaadhan "
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktaş ayaa la kulmay wakiilo ka socda ururada baaskiilka ee ka shaqeeya magaalada Bursa. Duqa magaalada Aktaş wuxuu kala tashaday booqdayaashiisa 'kor u qaadista isticmaalka baaskiilka iyo kor u qaadista wacyiga taraafikada'. Bursa weyn [More ...]